महामारीमा नेपालगन्जले निभायो पश्चिमको अभिभावकत्व - Arthapage
महामारीमा नेपालगन्जले निभायो पश्चिमको अभिभावकत्व
प्रकाशित मितिः ३ जेष्ठ २०७८, सोमबार ०६:३६ May 17, 2021
नेपालगञ्ज, जेठ ३ । नेपालगन्ज पश्चिमको लाइफलाइन हो । यो शहरले यसपटक साच्चिकै लाइफलाइन हो प्रमाणित गरेको छ । पश्चिमका जुनसुकै जिल्लाका कोभिड प्रभावितलाई नेपालगन्जले उपचार गरिरहेको छ ।
हर सुखदुःखमा साथ दिइरहेको छ । नेपालगन्जका मेयर डा. धवल शम्सेर राणा भन्छन्- हामीले नेपालगन्ज मात्र होइन पश्चिमलाई हेरिरहेका छौं । सीमित साधन, स्रोतका बीच कोभिड नियन्त्रण गर्ने कुरामा प्रयासरत छौं । नेपालगन्ज न कुनै प्रदेश राजधानी हो नत राज्यका उपल्लो निकायले प्राथमिकता नै दिएका छन् । तर यसले पश्चिमको अभिभावकका रुपमा महामारीको विपद्मा आफुलाई प्रमाणित गरिदिएको छ । अक्सिजन वितरणकै विषयमा कतिले नेपालगन्जलाई अक्सिजन नपुग्दासम्म अन्त पठाउनुहुँदैन भने । तर मेयर राणा फराकिलो सोंच सहित यसो भन्छन्- यस्तो सोंच राखेर नेपालगन्ज हिड्दैन । नेपालगन्जलाई पनि पुग्ने र अन्त पनि पुग्ने गरी काम गर्नुपर्छ । हामीले फराकिलो सोंच बनाउन सक्नुपर्छ ।
नेपालगञ्ज उप–महानगरपालिकाले कोभिड रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सम्भव भएसम्म सम्पूर्ण प्रयास जारी राखिएको जनाएको छ । उपमहानगरपालिकाले आईतबार आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा नगर प्रमुख डा= धवलशम्शेर राणाले यसपटक स्वास्थ्य उपचार र सेवामा बढि ध्यान दिइएको जानकारी दिए ।
उहाँले जिल्लाभरका अस्पतालहरुमा अक्सिजन अभाव हुन नदिन र अन्य उपचार व्यवस्थापनका लागि सहजिकरण गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । आगामी दिनमा पनि कोभिड नियन्त्रण र रोकथामका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याएर अघि बढ्ने योजना बनाएका छौं, उहाँले भन्नुभयो,– कोभिड विरुद्ध लड्न सबै पक्षबीच सहकार्य हुन जरुरी छ । उहाँले नगरभित्र सञ्चालित आईसोलेसनले अस्पताललाई सहयोग पुगेको बताए ।
उप–प्रमुख उमा थापा मगरले कोभिड रोकथाम नियन्त्रणका लागि नेपालगञ्जले सक्दो प्रयास जारी राखेको भन्दै नेपालगञ्जले गरिरहेका कार्यक्रमबारे जानकारी दिए । प्रबक्ता प्रमोद रिजालले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकासँगै वडास्तरबाट पनि प्रभावकारी कार्यक्रम भएको बताउनुभयो । पत्रकार भेटघाटमा वडा नम्बर २ का वडाध्यक्ष सुनील सिंह हमाल, वडा नम्बर १८ का वडाध्यक्ष दिपक वर्मा लगायतको सहभागिता थियो ।
७. नगरमा कोभिड संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन नगरप्रमुख डा। धवलशम्शेर राणाको संयोजकत्वमा कोभिड रोकथाम र नियन्त्रणका लागि भईरहेका कामको अनूगमन र व्यवस्थापनका लागि उच्च स्तरीय समिति गठन गरेको छ । समितिमा उप–प्रमुख उमा थापा मगर, प्रबक्ता प्रमोद रिजाल, वडा नम्बर २ का वडाध्यक्ष सुनीलसिंह हमाल, वडा नम्बर ३ का वडाध्यक्ष मो। अयुव सिद्धिकी, वडा नम्बर १२ का वडाध्यक्ष बुद्धिसागर सुवेदी, वडा नम्बर १४ का वडाध्यक्ष ओमकारनाथ मिश्रा,वडा नम्बर १८ का वडाध्यक्ष दिपक वर्मा र कार्यपालिका सदस्यहरु इन्दिरा शाही, मञ्जु नेपाली र कौसलकुमार धोवी रहनुभएको छ ।
१५.नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले कोभिड रोकथाम र नियन्त्रणका लागि आगामी दिनमा पनि पुर्व तयारीलाई प्राथमिकता दिनेछ । आगामी बजेटमा कोभिड संक्रमणको दरलाई मध्यनजर गरि रोकथाम र नियन्त्रणमा केन्द्रीत भई अघि बढ्ने योजना बनाएका छौं ।
प्रकाशित मितिः ३ जेष्ठ २०७८, सोमबार ०६:३६ |
Prevभेरी अस्पताललाई रु १५ करोड दिन अर्थमन्त्रालयको सहमति
Nextजनताको बहुदलीय जनवादको महत्व